'एमाले–माओवादीको एकता इतिहासकै ठूलो घटना' : भरतमोहन अधिकारी - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘एमाले–माओवादीको एकता इतिहासकै ठूलो घटना’ : भरतमोहन अधिकारी
Posted by Milap Subedi | २ फाल्गुन २०७४, बुधबार १७:३९ |
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । दुई ठुला पार्टी एक हुनैलाग्दा यसै एकताको विषयलाई लिएर एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनै अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
एमाले–माओवादीको एकता होला त ?
– छलफल चलिरहेको छ । दुई पार्टी एक हुनु इतिहासकै ठूलो घटना हो । गठबन्धन गर्दा नै चुनावी परिणाम देखियो । यसले कम्युनिष्टहरुलाई मात्र एक ठाउँमा ल्याउँदैन, राजनीतिक स्थिरता पनि ल्याउँछ । शान्ति र समृद्धिको ढोका खुल्छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीहरु एउटै झन्डामुनि उभियुन भन्ने नेपाली जनताले चाहेका छन् । एमाले–माओवादीको एकता आजभोलि नै टुंगिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु ।
एकता बाध्यता यो कि आवस्यकता ?
– यो बाध्यता होइन, आवश्यकता हो । यदि वाम एकता नभइदिएको भए बहुमतको सरकार बन्दैन थियो । फेरि हङ पार्लियामेन्ट हुन्थ्यो, राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्थ्यो । अब ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने सरकार आयो । राजनीतिक स्थिरता हुनेभो । देश विकासका लागि अनुकूल वातावरण बन्यो ।
एकताको आधार के हुनुपथ्र्यो ?
– एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याएको छ, माओवादीले माओवादसहितको जनवाद भनेको छ । यसका आ–आफ्नै इतिहास छन् । जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम बनाउँदा मै सहभागी थिएँ । गफको भरमा आएको होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद । देशको स्थिति हेरेर अब कम्युनिष्ट हिड्ने बाटो यो हो भनेर हामीले निक्र्योल गरेको एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले हो । माओवादी साथीहरुको पनि लामो इतिहास छ, कुर्बानी छ । रगत बगाएर आउनुभएको छ, उहाँहरुको सोच चिन्तन बेग्लै छ । यो दुईवटा विचारलाई मिलाउनुपर्ने छ ।
Previousभ्यालेन्टाईनमा आयो केकीको ‘अब मनसँग मन’ (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextएकता संयोजन समितिको बैठक सुरु, पार्टी एकताबारे निष्कर्ष निकालिने
८७ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैदको सजाय राष्ट्रपतिले माफी दिइन
१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०८:०२
राप्रपाभित्र बहसः सिंहदरबार पस्दा भोट घट्यो, अब सरकारमा नजाऊ
७ असार २०७४, बुधबार १३:३९
मधेस आन्दोलनका पीडितलाई सहयोग स्वरुप सरकारको ६ करोड
१४ असार २०७३, मंगलवार ०७:४९
१२ पुष २०७५, बिहीबार १३:३२